वाइडबडी काण्ड: 'प्रचण्ड, देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नता' | Citizen Post News
काठमाडौं । एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले वाईडबडी विमान खरिद प्रकरण पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संलग्नतामा भएको खुलसा गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीत्रयको कार्यकालमा र सहमतिमा बाईडबडी प्रकरण भएको देखिएको बताएका हुन् ।
अध्यक्ष लोहनीले भने,‘यो काण्ड दुई भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा र सहमतिमा भएको देखिन्छ । यसमा को के पदमा छ भन्ने प्रश्नलाई गौण राखि दोषीलाई जोसुकै भएपनि छानबिन हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टीको माग त्यहि हो ।’ उनले वाईडबडी जहाज खरिद काण्डमा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले संसदलाई ढाँटेको आरोप लगाए । उनले भने,‘यो प्रकरणमा संसदलाई मन्त्रीले ठाडै ढाँटे । संसदलाई ढाँट्नु भनेको ‘अब्स्ट्रक्शन अफ जष्टिस’ हो । अरु देशमा भएको भए कारबाही हुन्थ्यो ।’
वाईडबडी प्रकरणमा छानबिन गर्न र सत्य, तथ्य बाहिर ल्याउन पर्यटनमन्त्री अधिकारीले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने पनि माग गरे । उनले भने,‘लेखा समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यो यथार्थताको परिवेशमा नेपाल सरकारका पर्यटनमन्त्रीले अविलम्ब राजिनामा गर्नुपर्दछ । र, अख्तियारले अविलम्ब छानबिन सुरु गर्नुपर्छ ।’
सम्झौता पालना गर सरकारः
उनले अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता पालना गर्नुपर्ने पनि बताए । डाक्टर केसीसँग सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरेको तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी उपेक्षा गरेको उनको आरोप थियो । उनले भने,‘सरकारले पन्ध्रौं अनशनपश्चात् जुन सम्झौता गरेको छ, त्यसलाई पालना गरी आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीजीले ईमानदारीता देखाउनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा विद्येयक गइसकेकोले अब मेरो केही छैन, जे गर्छ संसदले गर्छ भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारको अहिले प्रचण्ड बहुमत छ । तर, मेरो केही छैन भनेर उहाँले यसरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन मिल्छ ? डा. केसीसँग जे सम्झौता र हस्ताक्षर भएको छ, त्यो सबै लागु हुनुपर्छ ।’
मुलुक भ्रष्टाचार ब्याप्त:
मुलुकमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएको उनले आरोप लगाए । अध्यक्ष लोहनीले भने,‘साँढे ३३ केजी सुन प्रकरणमा जनता अब थाकिसके । फाईल प्रधानमन्त्रीकहाँ अड्किएको छ ।’ नेपालबाट अरबौंको धन विदेश लग्ने यथार्थता जनतासामू आएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘नेपालको धन देशबाहिर जानु नेपालको कानुनविपरित हो । स्वीस बैंकमा नेपालबाट रकम जम्मा गर्नु स्पष्ट गैरकानुनी हो र यो काम दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् व्यापक वृद्धि भएको छ । द्वन्द्व सकिएपछि २०६३ सालमा मात्रै पनि ४ अरबभन्दा बढि स्वीस बैंकमा जम्मा भएको छ ।’
उनले यसरी जम्मा गर्ने को हुन ? र कसरी उनीहरुले जम्मा गरे यस्ता प्रश्नबारे नेपाल सरकारसँग अलिकति पनि नैतिकता बाँकी रहे तुरुन्त अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने पनि माग गरे । उनले भने,‘नेपालबाट अवैध तरिकाले रकम विदेशमा लगि त्यसलाई विदेशी लगानी भन्दै फेरि नेपाल भित्र्याउने धन्दा बढेको छ । नेपालबाट कानुविपरित पुँजी बाहिर लगि यो कालो धनलाई सेतो धन बनाउने अभियानले व्यापकता पाएको छ ।’
लोहनीले यसबारे पनि सरकारको नैतिकता र जनताप्रति संवेदनशीलता भए अविलम्ब अनुसन्धान गर्न माग गरे । उनले ‘मनी लाउन्ड्रिङ’ को काम कसले गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरे । ‘जसले गरेपनि यो कानुनविपरित हो’, उनले थपे,‘यो धन्दा बढ्दै गयो भने नेपाल राष्ट्र नै अर्थतन्त्रको कालो सुचीमा पर्न सक्छ, त्यो डर नेपालमा आएको छ ।’
उनले यो विषय अविलम्ब अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमार्फत छानबिन हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘जो–जो दोषी देखिन्छन्, उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’लोहनीले भने,‘यसको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग अर्थ मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री अन्तर्गत राखिएको छ । तर, यो परिवर्तनपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग निष्कृय र निरर्थक भएको छ ।’